Kedu ihe bụ Augured Reality? Akụkọ Teh na Real-World Examples of AR
Site n'echiche nke onye na-ere ahịa, ekwenyere m n'ezie na eziokwu dịwanye elu nwere ikike karịa karịa nke eziokwu. Ọ bụ ezie na eziokwu dị adị ga-eme ka anyị nwee ahụmịhe zuru oke, eziokwu dịwanye elu ga-eme ka anyị na ụwa anyị bi na ya ugbu a kwalite ma nwee mmekọrịta. Anyị ekerịtala tupu AR nwere ike imetụta ahịa, ma ekwenyeghị m na anyị akọwachaala eziokwu dị elu ma nyekwa ihe atụ.
Igodo nke ikike na ire ahia bụ ọganihu nke teknụzụ ama ama. Site na bandwidth buru ibu, ngụkọta ọsọ ọsọ nke desktọọpụ jikọtara na afọ ole na ole gara aga, yana ọtụtụ ebe nchekwa - ngwaọrụ ekwentị na-emepe ụzọ maka mmụba eziokwu na mmepe. N'ezie, na njedebe nke 2017, 30% nke ndị ọrụ ama ama eji ngwa AR karịrị ihe karịrị nde mmadụ 60 na US naanị
Gịnị bụ Ezie Agụmagụ?
Kedu ka esi etinye AR maka Ahịa na Ahịa?
Dabere na akụkọ na-adịbeghị anya site na Elmwood, teknụzụ ịme anwansị dị ka VR na AR ka atọrọ iji nye ọnụ ahịa ozugbo maka ụlọ ahịa na ndị na-azụ ahịa na mpaghara abụọ. Nke mbu, ha ga - agbakwunye uru ebe ha na - eme ka ihe omuma nke onye ahia banyere ahia ya. Dịka ọmụmaatụ, site na ịme ka ozi ngwaahịa dị mgbagwoju anya na ọdịnaya ndị ọzọ dị mkpa dịkwuo ike site na ịme egwuregwu, ịnye nkuzi ọfụma, ma ọ bụ inye ịkwa agwa, dịka n'ihe metụtara ịrapara ọgwụ.
Nke abuo, teknụzụ ndị a ga-apụ ebe ha nwere ike inyere ụdị aka ịkọ ma gbanwee ụzọ ndị mmadụ si ele akara ahụ site na ịmịpụta ahụmịhe, mmekọrịta mmekọrịta na akụkọ na-akpali akpali tupu ịzụta. Nke a nwere ike ịgụnye ime nkwakọ ngwaahịa ọwa ọhụrụ maka njikọ aka, imechi ọdịiche dị n'etiti ịntanetị na ịzụ ahịa anụ ahụ, ma weta mgbasa ozi ọdịnala na akụkọ ndụ dị ike.
Ihe Nlereanya nke Akpukpo Eziokwu Mmejuputa Ahịa na Azụmaahịa
Otu onye ndu bụ IKEA. IKEA nwere ngwa ahia nke n’enye gi ohere ighari ighari akuko ha ma ichota ngwa ahia ichoputara mgbe ichoro n’ulo. Na IKEA Ebe maka iOS ma ọ bụ gam akporo, ngwa ha nke na-enye ohere ka ndị ọrụ rụọ ọrụ nke ọma “tinye” ngwaahịa IKEA na oghere gị.
Amazon agbasoro ihe atụ na AR anya maka iOS.
Ihe omuma atu di n’ahịa bu ihe nke Yelp na ha mobile ngwa akpọ Monocle. Ọ bụrụ na ibudata ngwa ahụ ma mepee menu ndị ọzọ, ị ga-ahụ nhọrọ a na-akpọ Monocle. Mepee Monocle na Yelp ga - eji ọnọdụ mpaghara gị, ọnọdụ ekwentị gị na igwefoto gị kpuchie data ha site na igwefoto. Ọ dị ezigbo mma - ọ na-eju m anya na ha anaghị ekwu maka ya oge niile.
AMC atlọ ihe nkiri na-enye a ngwa mkpanaaka nke na-enye gị ohere ịkọwa na posta ma lelee ihe ngosi nkiri.
Mgbanwe malitere enyo mmekorita maka ntaneti ahia ebe onye oru nwere ike ihu otu ha gha adi nma na etemeete, ntutu, ma obu ihe eji etinye aru. Sephora weputara teknụzụ ha site na ngwa mkpanaka.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike itinye ngwa nke eziokwu ha na-abawanye site na iji ya - ARKit maka Apple, ARCore maka Google, ma ọ bụ Hololens maka Microsoft. Companieslọ ọrụ na-ere ahịa nwekwara ike irite uru Augment nke SDK.
Eziokwu Akpukpo: Oge Gara Aga, Ugbu A, na Ọdịnihu
Nke a bụ nnukwu nnyocha na infographic, Gịnị bụ Akpukpo Eziokwu, nke emere Vexels.
Tags: arar ahịakwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwuaugmented eziokwu definitionọdịnihu ma ọ bụ arakụkọ ihe mere eme nke arikea katalọgụikea katalọgụvexelskedu ihe bụ arihe bụ eziokwu augmentedyelp ngwa ngwayelp monocle